Somali Bus Camera Info - Seattle Public Schools
Seattle Public Schools » Departments » Transportation » Student Safety Stop Arm Camera Program » Somali Bus Camera Info
Ka dhig Seattle mid Ammaan u ah Ardaydeena. BARRO SHARCIGA!
Ammaanka ardayga waa muhiimada ugu saraysa Iskuulada Dadweynaha Seattle anaguna waxaynu aaminsanahay in barnaamijka kaamirada ammaanka lagu xiro baska iskuulka ay dad ku caawin doonto samaynta gelid iyo ka bixid baska iskuulka ammaan u ah ardayda bulshadeena.
Siduu u Shaqeeyaa Nidaamka
1. Oggaansho/Soo qabasho
3. Aargada Baabuurka
Kaamarooyin Fiidiyoow ah ayaa lagu xirayaa meelaha ugu muhiimsan ee banaanka baska iskuulka ah.
Marka baska iskuulka uu gudbo meesha uu istaago, nidaamka wuxuu si ootamaatik ah usoo qabanayaa haddii uu gaarigu dhaafay meesha uu basku istaago ee ah gudaha aaga khasabka ah in la istaago.
Haddii uu gaari dhaafo baska iskuulka, kaamarooyinku waxay soo qabanayaan fiidiyoow tusinaya gaariga xad gudbay.
Sawirada xad gudubka ah ee laga soo qaatay fiidiyoowga ma ahan kuwo kaliya kamid ah gaariga xad gudbaya ee dhaafaya baska iskuulka, laakiin sidoo kale waxaa kamid ah aargada gaariga iyo baska iskuulka dhaafay meesha la istaago. Fiidiyoowga gaariga xad gudbaya waa la xajinayaa si loogu sameeyo daliil dheeraad ah oo xad gudubka ku saabsan.
Muraajaco kama dambays ah oo lagu sameeyo sawirka iyo fiidiyoowga xad gudubka ah ayaa waxaa baaritaan sharci ku samaynayaa shaqaale sharci fuliye ah, midkaas oo kadibna diidi kara ama oggolaan kara xad gudubka.
Haddii xad gudubka la oggolaado, waxaa lasoo saari doonaa codsi maxkamad waxaana loo diri doonaa qofka iska leh gaariga.
Goormee laga Istaagayaa Baska Iskuulka
RCW 46.61.370: Marka baska iskuulka uu ka leeyahay calaamada istaaga banaanka nalalka guduudkana ay aftiimayaan, baabuurta waxaa looga baahanyahay in ay istaagaan:
Leemanka-labbada ah, waddo aan kala qaybsanayn.
Marka baska iskuulka uu u istaago dadka rakaabka ah, DHAMMAAN taraafikada ka ahaata dhammaan dhinacyada waa in ay istaagaan.
Waddo Aanan qaybsanayn oo leh seddex ama ka baddan oo leeman ah.
Marka baska iskuulka uu u istaago dadka rakaabka ah, kaliya waxaa la oggolyahay baabuurta u safraya hal dhinac maadaama basku ay khasab tahay in uu istaago.
Waddada loo qaybiyay labbo dhinac oo kala duwan oo safar ah.
Marka baska iskuulka uu u istaago dadka rakaabka ah, kaliya taraafikada la socota baska ayay khasabtahay in ay istaagto.
Taraafikada soo socota ma ahan in ay istaagaan waddooyinka leemanka-baddan oona la qaybiyay. Basaska iskuulka waxaa laga mamnuucay in ay sameeyaan istaagid midaas oo u baahan ardayga in uu gooyo noocyada waddooyinkan.
Su'aalaha Inta Baddan La weydiiyo
Halkee lagu xiraa kaamarooyinka ammaanka baska iskuulka?
Kaamarooyinka ammaanka baska iskuulka waxaa lagu xiraa meelaha muhiimka ah ee banaanka basaska iskuulka ee Iskuulada Dadweynaha Seattle.
Waa imisa ganaaxa muxuuna noqonayaa diiwaankayga daraawalnimo?
Lacagta ganaaxa ah waa $419. Midaan waa ciqaab rayid, mana jiraan wax dhibco ah oo la qiimeyn doono.
Goormee iyo halkeen ka istaagaa baska iskuulka?
Baabuurka iskuulka wuxuu istaagsanyahay marka nalalkiisa guduudka ah ee bedelka ahi shaqaynayaan wuxuuna istaagayaa banaanka calaamada istaaga asaga oo nalkana daaraya. Adiga waxaa khasab kugu ah in aad istaagtid ugu yaraan 20 cag meel u jirta afka iyo 20 cag meel u jirta gadaasha baabuurka iskuulka.
Nidaamka Nalka Iftiimaya
Waxaa jira Nalal Guduud iyo Amber ah: Waxay ku yaaliin dusha sare ee baabuurka iskuulka. Hadafkoodu wuxuu yahay in ay uga digaan baabuurta kale in baabuurka iskuulka uu u diyaar garoobayo in uu istaago.
Waxaa Khasab kugu ah in aad Istaagtid – Waa Sharci.